Pingdom: Ọrụ, Nlekota, na Nlekọta | Martech Zone
Pingdom: Ọrụ, Nlekota, na Njikwa
Wenezdee, Jenụwarị 29, 2014 Douglas Karr
Anyị abụwo ndị na-akwado Pingdom ruo oge ụfọdụ. Ọ bụ ngwaọrụ dị mfe iji nyochaa saịtị gị, ngwa weebụ yana API iji hụ na ha malitere ma na-agba ọsọ. Anyị nyochaa Martech Zone, DK New Media na CircuPress na ọrụ. Mgbe anyị na otu onye ahịa na-arụ ọrụ, anyị mejuputara ya, anyị mere otu ihe API Kpọọ nke zara ajụjụ siri ike ka anyị wee nwee ike nyochaa oge nzaghachi nke ngwa ahụ site na gburugburu ụwa.
Ikpo okwu a agbasawanye nke ukwuu na Pingdom na-aga n'ihu ịgbakwunye sava nlekota na mpaghara ndị ọzọ yana atụmatụ na arụmọrụ na-enye aka karị. Otu njiri mara bụ ha Real-oge Nlekota oru (RUM) nke na-enye ezi nghọta banyere oge na akparamagwa nke ndị ọbịa na saịtị gị. Nke a bụ nkọwa nke ọrụ - nke dị na akaụntụ Pingdom niile.
Maka ndị otu nlekota oru, Pingdom na-anwale ihe ọhụụ akpọrọ BeepManager. Onye njikwa Beep na-enye ohere ka ndị otu jikwaa usoro ihe omume ha ka e wee dọọ ndị na-eme egwuregwu kwesịrị ka a dọọ ha aka ná ntị.
Tags: onye njikwa beepdowntimeihu peejiibe peejiPingdomonye na -ahụ maka beepmanagerpingdom ezigbo oge nlekota orupingdom rọmrọmoge ogeahụmahụ onye ọrụux
Feb 6, 2014 n’elekere 5:49 nke abali
Ọ na-amasị m Pingdom na m na-asọpụrụ ihe ha na-eme, mana ọnụahịa adịghị ọnụ maka m na obere azụmaahịa m. Ọ bụ ya mere m ga-eji chọọ ihe dị ọnụ ala karịa na ọ bụghị oke ọnụ egAnturis, nke nwere otu àgwà nlekota, mana yana ọnụahịa dị obere.